भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिको सन्देश लिएर नेपाल आएका थिए ,रअ,पोखरेल…हेर्नुहोस!
काठमाडौ : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले ‘रअ’ प्रमुख भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देशवाहकका रुपमा नेपाल आएको बताएका छन्।शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै पोखरेलले भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर रअ प्रमुखले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेको खुलासा गरेका हुन्।पोखरेलले भनेका छन्– ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देश वाहकका रुपमा रअ’ का प्रमुख नेपाल आएर नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भेटे । यता नेपाली प्रधानमन्त्रीको विरोध सुरु भो ।’
आफ्नै मुलुकको प्रधानमन्त्रीको विचार र काममा भरोसा गर्न आग्रह गर्दै भनेका छन् – ‘विरोधको योजना हो या नियती ? वुझ्न गाह्रो भो । आफ्नै मुलुकको प्रधानमन्त्रीको विचार र काममा भरोसा गरौ ।’ नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्याको परिणाम सुखद होस् भन्दै पोखरेलले कामना गरेका छन् ।प्रधानमन्त्री ओलीले रअ प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई भेटेको सार्वजनिक भएपछि सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । आफ्नै पार्टीका नेताहरुले पनि यसको विरोध गरेका छन् ।
०००००० यो पनि पढ्नुहोस
रअका प्रमुखसँग ओलीसँगै अन्य ६ शीर्ष नेताहरुले समेत भेटेको खुलासा, क–कसले भेटे ?…हेर्नुहोस!
कार्तिक । भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग बालुवाटारमै भेटवार्ता गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चौतर्फी आ,लोचना भएको छ ।
विदेशी गुप्तचर संस्थाका प्रमुखलाई सरकारी निवासमै प्रधानमन्त्रीले भेटवार्ता गर्नुलाई धेरैले कु,टनीतिक मर्यादा वि,परित रहेको जि,किर गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीसँग मात्र शि,ष्टाचार भेटवार्ता गरेर फर्किएका भनिएका रअ प्रमुखले अन्य ६ जना शीर्ष नेताहरुलाई समेत भेटेको खुलासा भएपछि नेपालको रा,जनीतिक क्षेत्र त,रंगित बनेको छ ।
रअ प्रमुखले प्रधानमन्त्री ओलीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुपूर्व नै नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग भेटवार्ता गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
यस्तै कांग्रेस नेताहरु रामचन्द्र पौडेल र सशांक कोइरालाले पनि रअ प्रमुख गोयलसँग भेट्नुभएको थियो । जनता समाजवा,दी पार्टीबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले समेत भेट गर्नुभएको समाचारमा उल्लेख छ । यद्दपी, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकाे सचिवालयले भने रअ प्रमुखसँग भेट भएकाे भन्ने विषयलाई ख,ण्डन गरेकाे छ ।
नेपालका विभिन्न रा,जनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग रअ प्रमुख गोयलले किन भेट गरे ? भेट के विषयमा केन्द्रीत थिए भन्नेबारे भने केही खुलेको छैन । तर भारतीय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार गोयलको भेट नेपाल भारतबीच चुलिएको सी,मा वि,वादमा केन्द्रीत थियो । भारतीय सेना प्रमुखको औपचारिक नेपाल भ्र,मणपूर्व गुप्चर संस्थाको प्रमुखको भ्रमण र शीर्ष नेताहरुसँगको भेटवार्ताले नेपाली रा,जनीतिक क्षेत्र छिट्टै त,रंगित हुनसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको आँकलन छ ।
गोयलले प्रधानमन्त्री ओलीसँग गरेको शिष्टाचार भेटवार्तालाई लिएर नेकपाभित्रै आ,लोचना भैरहेको छ । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि पूर्व उपप्रधानमन्त्री डा. भीम बहादुर रावलले समेत सार्वजनिक रुपमै उक्त भेटवार्ताको बारेमा आ,लोचना गर्नुभएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले भने उक्त भेटवार्ता शिष्टाचार भेटवार्ता भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग त्यस्तो भेटवार्ता माग्दा दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन समेत रहेको दाबी गरेको छ ।
पहिला पहिला नेपाली नेताहरु आफैं भारत पुगेर यस किसिमका भेटवार्ता गर्थे । तर अहिले भने केही परिदृश्य फेरिएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका दूतका रुपमा परराष्ट्र सचिव केही समय अघि नेपाल आएका थिए । यस्तै सेनाअध्यक्ष आगामी नोभेम्वरमा नेपाल आउँदैछन् ।